Bandhiga Sled ee Ordu Plateaus | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Bandhig faneed lagu qabtay Ordu Plateaus
06 / 01 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
ciidankii waxay ku dhex milmeen daaqa
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu si loo wanaajiyo isboortiga xilliga qaboobaha iyo dalxiiska jiilaalka ee gobolka Ordu wuxuu soo qabanqaabiyay xaflad sled ah oo ah 3 wado oo kaladuwan.
Bandhig-jeex jeexan oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaaladda ayaa lagu qabtay magaalada Ordu markii ugu horreysay; Aybasti Khamiista Plateau, Mesudiye Keyfalan Plateau iyo Akkus Argan Plateau ayaa la qabtay. Bandhigu wuxuu ku abaabulay 3 wado oo kaladuwan, qofkasta oo 7 ilaa 70 ah oo u yimid agagaarka orodka adoo adeegyo iyo tas-hiilaad u fidiya Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu ee Caasimadaha. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, ayaa ka qeybgalay xaflad lagu qabtay magaalada Aybasti Khamiista Plateau. Tartannada Canoe, iskeytiga doomaha barafka, barafka barafka lagu ciyaaro iyo tobogganing ayaa lagu qabtay Aybastı Plateau, oo caan ku ah macnihiyeyaasha. Goor dambe, shaah iyo barbecue ayaa loogu adeegay dabka.
“DHAMMAAN DHAQAALKA wuu arki doonaa meeshan oo adduunka ka sii fiican”
Intaas ka dib, Aybastı wuxuu si buuxda uga duwanaan doonaa Duqa Magaalada Ordu. Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, uz Waxaan rabnaa inaan Per makeembe Highland ka dhigno xarun soo jiidasho leh xilliga qaboobaha. Dareenkaas, waxaan qaadnay talaabooyin aad u muhiim ah. Intaa ka dib, qabow iyo dib uma noqon. Waxaa jiri doona orodyahano iyo kaarashleyda tartamaya meheradaha. Qof kastaa wuu arki doonaa meeshan, kaasoo ah yaabka adduunka. Waxaan ka dhisi doonnaa halkan hoose. Intaas ka dib, Aybastı ayaa gebi ahaanba ka duwanaan doona. Awoowayaasheen waxay ogaadeen quruxda meeshan waqtigeeda. Haatan waxaan ka dhigi doonaa meeshan mid aad u qurux badan oo qalbigaagana waannu ka adkaan doonnaa. Tani sidoo kale waa wadnaha degmada. Shaqadeenna oo dhami waa inaan kaa farxinno oo aan kaa dhigno dhoola caddeyn. Inbadan oo aad ku qanacdo, ayaa inta badan ku qanacnaan doonnaa. Waxa kaliya ee aan kaa sugeynaa waa inaan hubinno horumarka Aybastı iyadoo la kordhinayo xoolahaaga. ganacsatada ugu guulaha badan ee Turkey Aybastılı ee. Waxaan u baahanahay inaan ganacsatada halkan kusoo celino. Cidina mar dambe ku hees maayo heesta hiddaha.
UZ WAAN KU NAHAY IN AAN LAGU DHACDO MAALMAHA GUUD EE GUUD ”
Waxay sheegeen inay sameeyeen wax walba oo ay karaan si ay u qurxiyaan Ciidanka. Şenel Yediyıldız wuxuu yidhi, Maanta waxaan joognaa Tokat, Amasya iyo albaab Sivas. Waxaan halkaan la joognaa kuwa ka yimid magaalooyinka deriska ah. Maanta, waxaan aragnay sida quruxda magaaladeenna iyo plateauskeenu u fiican yihiin. Waxaan qabnaa mid ka mid ah maalmaha ugu wanaagsan xilliga qaboobaha. In alla inta aan siinno midnimo iyo wada-noolaansho magaaladeena, waan haysannaa. Waxaan sameyneynaa wax walba oo aan kari karno si aan meeshan u qurxinno. Bilowga qiimaha leh iyo tabarucaada Duqa Magaaladeena, waxaan u magacownay aaggan Bolaman Basin waxaanan bilownay mashruuc. Mashruucan, dhulkani wuxuu noqon doonaa mid lagu noolaan karo. ”
MADAXWEYNAHA MUHIIMKAADA UGU DAMBEEYAY IN LAGU DARO INAAN ISTICMAALO XARUNTA 3 Bilood, maahan 12 Bilood ”
Aybastı iyo Perşembe Plateau waa inay arkaan qof walba oo hoosta ka xariiqaya Duqa Aybastı Beytullah Gençtan, “Duqa Magaalada waaweyni ee ma ahan 3 bilood, 12 bilood ayaa ina siiyay iftiinka odhanaya Ciidanka. Khamiista Plateau, Aybastı'm aad u qurux badan. Waxaan ogaynay inay qurux badanaa jiilaalka, laakiin waxay ahayd inay ogaato inay ku arki karto qurxintani dadkeeda. Jiilaalka, dad aad u fara badan ayaa u yimid bannaanka si ay ugu raaxaystaan. Maanta waxaan haysanaa badhasaab magaalooyin ka socda degmooyinka kale ee deriska ah. Maanta dhammaanteen waxaan heysanaa waqti wanaagsan oo wada jir ah.
“XIDHIIDHKA AYAA U UGU YAHAY US”
Duqa magaalada Mesudiye Isa Gul ayaa sheegay in Bandhiggu uu ahaa bilow wuxuuna yidhi, Bandhig Faneedka aan maanta halkan ku qabanay ayaa noogu ahaa bilow. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaaladeena ee naga taageertay arrintan. Waxaan aaminsanahay in Mesudiye Plateau uu ka mid noqon doono meelaha tirada lagu tiriyo ee Ordu sida Ulugöl sida Çambaşı Plateau.
Goobta 'ARGAN MEEL' waxay ka mid noqon doontaa meelaha ugu wanaagsan ee GÖ
Isaga oo ka hadlaya baaxadda barnaamijka, Duqa magaalada Akkus Isa Demirci wuxuu yidhi, Ar Ar Argan Plateau waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan furitaanka ciidanka ee dalxiiska muddo 12 bilood ah. Tani waxay noqon doontaa mid ka mid meelaha ugu fiican mustaqbalka. Waxaan diyaarinay kaabayaasha dhulkeenna ku yaal dalxiis xagaaga iyo jiilaalka. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada Magaalada oo gacan ka gaysatay ururkan. ”
“Waxaan ku faraxsanahay ABDOMA“
Muwaadiniinta ka qeyb qaadanaya barnaamijka, “Waxay ahayd urur aad u wanaagsan annaga. Waxaan ku raaxeysanay barafka ilaa ugu fiican. Waxaan halkan ku soo uruurinay xusuus fiican. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ordu, oo iyadu gacan ka gaysatay waxqabadyadan. Waxaan u mahadcelineynaa Mehmet Hilmi Güler ”.
Tartanka Kooban ee Kaararka ah waxaa lagu qaban doonaa Uludağ Fall Winter Winter
Ciidamada Coast ee xeebta
Helikopter iyo Kabaha Baabuurta ee Dhulka Highlands ee Ordu
Gawaarida Madadaalada ee Black Sea waxay la wadaagayaan baabuurta fiilada
Mashruuca garab-wadareedka ee Plateau ayaa xoojiya dhaqaalaha dalxiiska ee ciidanka
Bandhigga Dharka Lafaha
AnadoluJet waxay la kulantaa kuwa yaryar ee Fikradda Caruurta Kocaeli
Diyaargarowga Diyaarinta Barafka ee Başçiftlik
Bozdag Festival Festival 8 waxaa la qaban doonaa Febraayo
Aybastı Khamiista Plateau
Bandhiga Toboggan ee Ordu Highlands